आज मंगल ग्रह ठूलो र चम्किलो देखिँदै, हामीले कति बेला हेर्ने ? - साक्षी खबर आज मंगल ग्रह ठूलो र चम्किलो देखिँदै, हामीले कति बेला हेर्ने ? - साक्षी खबर
आज मंगल ग्रह ठूलो र चम्किलो देखिँदै, हामीले कति बेला हेर्ने ?
असोज २७, २०७७ | ५२२ पटक पढिएको
२७ असोज, काठमाडौं / आज मंगल ग्रह र पृथ्वी आमने सामने हुँदैछन् । त्यसैले मंगल ग्रह आज सबैभन्दा चम्किलो र ठूलो देखिने खगोलशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।
सन् २००३ मा मंगल ग्रह र पृथ्वीबिचको दुरी ३४।८ माइल थियो । अब सन् २०३५ सम्म पृथ्वी र मंगल ग्रह यति नजिक हुने छैनन् ।